Soomaalida ku dhaqan Yemen oo ay la soo daristay dhibaatooyin iyo cabsi xoog leh.
Yemen:-Dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Yaman ayaa waxa la soo daristay dhibaatooyin iyo cabsi xoog leh.Soomaalida ku nool gobolada kala duwan ee dalka Yaman, iyo kuwa qoxootinimada u galaya, ayaa waxaa la soo daristay dhibaatooyin ay kala kulmayaan dadka Yamaniyiinta ah,iyadoo uu sii siyaadiyo dareenka cabsida ah ee ay ka qabaan in lala xiriiriyo xarakada Al-Shabaab.
Saraakiisha ciidanka dalka Yaman, ayaa dhawaanahan soo saarayey warar ay aad uga naxeen dadka Soomaaliyeed ee dalkaas ku dhaqan, iyadoo ay soo baxayeen warar la xiriira in dad Soomaali ah ay isku qarxiyeen meelo dhowr ah oo dalka Yaman ka mid ah.
Dadka Soomaalida ah, gaar ahaan dhalinyarada ayaa arinkaas waxa ay ku keentay inay la soo gudboonaato cabsi, maadaama iyagoon ka mid aheyn loo maleyn karo inay Al-Shabaab ka mid yihiin.
Ciidamada ammaanka ee dalka Yaman, ayaa kala garaneynin dadka ay ka shakisan yihiin ee ay Al-Shabaab la xiriirinayaan, iyo dadka nolosha u soo doontay Yaman, waxaana taasi ay keeni kartaa in dad qoxooti ku ah dalka, ama kuwa iskaga nool, loo dhibaateeyo howlo ayan ku lug laheyn.
Arintani ayaa waxa ay imaaneysaa xili xarakada Al-Shabaab ay shaaca ka qaadday inay ka mid noqotay ururka Al-Qaacida oo qeyb ka mid ah ay ka dagaalanto dalka Yaman.